မာလိုင်းယွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မာလိုင်းယွန်း(အင်္ဂလိပ်: Merlion ၊ မလေး Singa-Laut ၊ တရုတ်: 鱼尾狮 ၊ တမီးလ်: மெர்லயன்) သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ အထိမ်းအမှတ်ရုပ် ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူမြို့ပြနိုင်ငံကိုလည်းကောင်း၊ စင်ကာပူကိုယ်စားပြု အားကစားအသင်းများကိုလည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုတံဆိပ်အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ပထမဦးဆုံး မာလိုင်းယွန်းပုံတံဆိပ်ကို စင်ကာပူခရီးသွားလုပ်ငန်းအစည်းအရုံးမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ .
မာလိုင်းယွန်း ဆိုသည့်စကားလုံးကို ပင်လယ်ခြင်္သေ့ ဟု အဓိပ္ပာယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ပုံသဏ္ဌာန်မှာ ခြင်္သေ့ဦးခေါင်းနှင့် ငါးကြင်းမြီး တွဲထားသကဲ့သို့ ရှိသည်။ ဦးခေါင်းသည် ခြင်္သေ့အတိုင်း သွားစွယ်၊ လည်ဆံမွေး စသည်တို့ ပါဝင်သော်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ခြေလက် မပါဝင်ပါ။ စင်ကာပူ၏ မူလဘူတမှာ တံငါရွာဖြစ်ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရစေသောအားဖြင့် ငါးခန္ဓာကိုယ်အမြီးပိုင်းကို ရုပ်ထုတွင် ပါဝင်စေသည်ဟု သိရသည်။ စင်ကာပူ၏ မူလအမည် သီဟပူရ - ခြင်္သေ့မြို့တော် ကို ရည်ညွှန်းသောအားဖြင့် ခြင်္သေ့ခေါင်းပိုင်းကို အသုံးပြုသည်။
မာလိုင်းယွန်းရုပ်ထု ပထမဆုံးရှိရာ နေရာသည် စင်ကာပူမြစ်ဝ၊ ပင်လယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူလျက် ဖြစ်သည်။ မာလိုင်းယွန်းပန်းခြံဟောင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့် အန်ဒါဆင်တံတားတို့ နောက်ခံနှင့် ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယု က တရားဝင်နေရာချပေးခဲ့သည်။ 
၁၉၉၇ ခုနှစ် အက်စပလန္နိတ်တံတား တည်ဆောက်ပြီးချိန်တွင် မာလိုင်းယွန်းရုပ်တုကို မြင်ကွင်းကွယ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်တုကို ပိုမိုထင်ရှားမြင်သာစေရန် လက်ရှိနေရာ မာရီနာပင်လယ်ကွေ့ သို့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြသည်။ မာလိုင်းယွန်းရုပ် အငယ်စားလေးတစ်ခုလည်း အနီးတွင်ထားရှိသည်။ အခြားနေရာများစွာသို့ ပြောင်းရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသော်လည်း မူလနေရာနှင့် အနီးဆုံးကို ရွေးခြယ်ခဲ့ကြသည်။ သက်တော်ရှည်ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယုမှ တစ်ဖန်ပြန်၍ ၂၀၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နေရာချပွဲ ထပ်မံလုပ်ပေးခဲ့သည်။
↑ The Monstrous Merlion: In the Original Sense။ 10 September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ "A new home for the Merlion". URA Skyline (July/August 2000) Archived 18 February 2012 at the Wayback Machine.. p. 6–8
Wikimedia Commons တွင် Sea lions in heraldry နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Wikimedia Commons တွင် Merlion နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
Official Merlion FAQs on Singapore Tourism Board website Archived 26 October 2005 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာလိုင်းယွန်း&oldid=632386" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၂၁:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။